९ तस्वीरमा हेर्नुस् उपत्यका सहित पहाडी जिल्लामा होलीको रौनक ! - Everest Dainik - News from Nepal
९ तस्वीरमा हेर्नुस् उपत्यका सहित पहाडी जिल्लामा होलीको रौनक !
२०७३, २९ फाल्गुन आईतवार
काठमाडौं, फागुन २९ । उपत्यकासहित पहाडी जिल्लामा आइतबार उल्लासपूर्वक होली पर्व मनाइएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक बिदासमेत दिएकाले काठमाडौंमा होलीको उल्लास हेर्नलायक थियो । एक अर्कामा अबीर दलेर सर्वसाधारणले होली मनाए ।
विभिन्न संघ संस्था तथा व्यवसायिक कम्पनीहरुलेसमेत सार्वजनिक ठाउँमा होली विशेष कार्यक्रम आयोजना गरे । शरद ऋतुबाट वसन्त ऋतुको आगमन भएको सुखद समयमा होली पर्व मनाइन्छ ।
याे पनि पढ्नुस होलीमा कडा सुरक्षा, थपिए ३ हजार प्रहरी, ४ सय ठाउँमा सुरक्षा जाँच
होलीको अवसरमा काठमाडौंको वसन्तपुरमा भएको होली विशेष कार्यक्रममा हजारौंको उपस्थिति थियो । विदेशी पर्यटकसमेत होलीमा रमाइरहेका देखिन्थे ।
अक्षय कोषका लागि पनि होली खेलेका छन् । कञ्चनपुरको ७ नतसीकृष्ण बैजनाथ बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले अक्षय कोष स्थापनाका लागि आइतबार होली खेले ।
सबै तस्वीर : रासस
ट्याग्स: Holi 2073